Isitudiyo seSexy-Plzeň (Pilsen) 100+ 5 uPhononongo lweNkwenkwezi! - I-Airbnb
Isitudiyo seSexy-Plzeň (Pilsen) 100+ 5 uPhononongo lweNkwenkwezi!
Plzen, Plzeň Region, Czechia
Wamkelekile kwiLizwe eliLikomkhulu lebhiya! I-Lonely Planet Top 10 kwi-2014 kunye ne-European Capital of Culture kwi-2015! Sinemizuzu nje kude kuyo yonke into eyenza esi sixeko sibe sikhulu - kwaye singaphezulu kwento eseglasini, yinto esentliziyweni.
Siyakwamkela kwindawo yethu ebanzi yesitudiyo kanye kufutshane nekhaya lethu! Le flethi iza nebhafu yokuphumla ye-jacuzzi, ikhitshi eligcweleyo, indawo eninzi ye-closet kunye nokufikelela kwi-terrace yethu enkulu, entle!
Sihlala kwikota ethandekayo yePlzen eyaziwa ngokuba yiSlovany, eyona ndawo idumileyo yesixeko ukuhlala. Siphakathi kanye phakathi kweetram ezimbini ngaphantsi kweemitha ezili-150 kude, kunye nendawo yokumisa ibhasi yetroli. Izithuthi zikawonke-wonke ziya kuba sembindini kwimizuzu emi-3, kodwa ukuhamba yimizuzu nje eli-10 ngosuku oluhle kwaye isikhululo sikaloliwe esikhulu yimizuzu esi-8 kanye ngeenyawo. Kwaye ukuba ufika ngemoto, kukho indawo yokupaka yasimahla yesitalato macala onke...
Zintathu iivenkile ezinkulu, indawo yokuthenga, kunye neyona ndawo inkulu yokuqubha (ngaphakathi/ngaphandle) esixekweni kwimizuzu nje embalwa ngeenyawo ukusuka kumnyango wethu wangaphambili. Singacebisa iindawo zokutyela ezimbalwa ezikufutshane kakhulu nekhaya lethu-okanye naziphi na esixekweni-kunye nezinye zezona ndawo zintle zokupapasha elizweni!
Sikwanayo nebhedi yomntwana esongwayo ukuba ufuna enye kwaye, ewe, sinobubele kakhulu kubantwana! Izinto zokudlala, iingubo, izilwanyana ezixutyiweyo...asikukhathazi nokuhlala kwabantwana kancinci!
Umfazi wam uhleli eSlovany ubomi bakhe bonke, kwaye ndaqala ukuza ePlzen ndisuka eLos Angeles ngo-2004. Siyathanda ukwabelana ngesixeko esisibiza ngokuba likhaya kwaye ngenxa yokuba igumbi lethu likufuphi, ungajonga phambili kwintshayelelo yobuqu yenza ukuba yonke indawo entsha izive iqhelekile kwaye imnandi!
I-HDTV ene-I-Chromecast, izitishi zeTV eziqhelekileyo
ISlovany yenye yezona ndawo zithandwa kakhulu ePlzeň - iivenkile ezinkulu, iiresityu, iikhefi kunye neebhari zonke ngaphakathi kwemizuzu emi-3 yokuhamba. Kodwa kuba singaphantsi kwemizuzu eli-15 ukuya embindini wesixeko ngeenyawo, okanye imizuzu emi-5 ngetram - uya kuchitha ixesha lakho elininzi apho!
Kuthi, i-Airbnb ithetha "I-Air Bed 'n Beer" - kwaye unokuhlala uthembele kum ukuba ndonwabele eyesibini kunye nawe! Iindwendwe zethu zamkelwe njengosapho kunye nomhlobo - siya kuhlala silapha ukuze sikubulise!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Plzen